के हो बिटक्वाइन, यसले कसरी काम गर्छ ?
बिटक्वाइन भनेको एउटा डिजिटल मुद्रा हो । जसको निर्माण र सञ्चालन विद्युतीय रूपले हुन्छ । यो दुनियाँमा प्रयोग भएका कम्प्युटरले गरेको गणितीय समस्याको समाधानबाट उत्पादित मुद्रा हो । जसको उत्पादन हुने प्रक्रियालाई हामी ‘माइनिङ’ पनि भन्छौं ।
यो एउटा यस्तो मुद्रा हो जुन कुनै देशबाट सञ्चालित होइन । र, यसमाथि कुनै देश तथा व्यक्तिको कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुँदैन । त्यसकारण यो साधारण मुद्राभन्दा फरक छ।
‘सेतोसी नाकामोटो’ नामक सफ्टवेयर डेभलपरद्वारा यसको प्रस्तावना गरिएको हो । जुन एउटा गणितीय प्रमाणका आधारको पेमेन्ट गर्ने प्रणाली हो । यो प्रस्तुत गर्नुको मूल कारण एउटा यस्तो मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउनुथियो, जसमाथि कसैको नियन्त्रण नहोस् । र, कमसेकम शुल्क तिरेर कारोबार गर्न पाइयोस् ।
यसको छपाइ तथा वितरण कसैले गर्दैन । यो मुद्राको कुनै पनि किसिमको बैंक वित्तीय संस्था तथा देशबाट भौतिक रूपमा छपाइ तथा वितरण हुँदैन । यो हामी मानिसको समुदयाबीच डिजिटल प्रक्रियाबाट उत्पादित मुद्रा हो । जुन समुदायमा जो कोही पनि आबद्घ हुन सक्छन् । बिटक्वाइन माइनिङ भनेको एउटा गणितीय समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ ।
के यो असीमित मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ ? होइन । दुनियाँभरमा गरी २,१०,००,००० बिटक्वाइन मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसमध्ये हालसम्म १,४०,००,००० भइसकेको छ । र, अरू माइनिङ हुने प्रक्रिया जारी छ । एक बिटक्वाइनलाई १० करोड हिस्सामा भाग गर्दा आउने एक भागलाई ‘सेतोसी’ भनिन्छ । त्यसले बिटक्वाइनको आविष्कारकको नामलाई जनाउँछ ।
साधारणतः प्रयोग हुने मुद्राहरू सुन तथा चाँदीमा आधारित छन् । जसको मतलब हामी कुनै पनि मुद्रा बैंकमा जमा गर्दा त्यसबराबरको सुन तथा चाँदी प्राप्त गर्न सक्छौं । तर, बिटक्वाइन सुन तथा चाँदीमा आधारित नभएर यो एउटा गणितीय प्रक्रियामा आधारित हो । दुनियाँभरमा मानिस सफ्टवेयरका मद्दतले गणितीय सूत्रको प्रयोग गरी यसको उत्पादन गर्छन् । जुन सूत्रहरू जो कोहीले पनि हेर्न सक्छन्, जसलाई हामी ओपन सोर्स पनि भन्छौं ।
कसरी कमाउनेरखर्च गर्ने?
नेपालमा राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी घोषित गरेको छ। यो यस्तो व्यवसाय हो जसमा अत्यधिक जोखिम हुन्छ साथसाथै अत्यधिक मुनाफा पनि। हाल १ बिटक्वाइनको बजार मूल्य लगभग ११ हजार डलर रहेको छ। यसको मूल्य स्थिर नभई निकै तलमाथि हुने गरेको छ।
बिटक्वाइनका फाइदा र नोक्सानी ?
बाजारमा बिटक्वाइन बाहेक पनि अन्य क्रिप्टो करेन्सी उपलब्ध छन् जसको प्रयोग आजभोली निकै हुन थालेको छ । जस्तै – रेड क्वाइन, सिया क्वाइन, सिस्कोइन, वाइस क्वाइन र मोनरो । क्रिप्टो करेन्सीका थुप्रै फाइदा रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै फाइदा भनेको, यो डिजिटल मुद्रा भएको कारण यहाँ ठगिको सम्भावना कम हुन्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीमा रिटर्न मतलब फाइदा धरै हुन्छ र अनलाइन लेन-देनमा सजिलो पनि हुन्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीको लागि कुनै नियम बनाउने संस्था छैन त्यसैले नोटबन्दी वा मुद्रा अवमूल्यन जस्तो स्थितिमा पनि यसमा कुनै प्रभाव हुँदैन । तर बिटक्वाइन जस्तो भर्चुअल मुद्रामा ठुलो तल-माथी हुने र समस्या दिन सक्ने हुन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा बिटक्वाइन एक दिनमा बिना कुनै सुचना ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट भएको बताइन्छ । सन् २०१३ अप्रिलमा भएको गिरावट निकै ठुलो थियो, एकै रातमा बिटक्वाइनको मुल्यमा ७० प्रतिशत कम हुँदै दुई सय ३३ डलर बाट ६७ डलर पुगेको थियो ।
अमेरिकी शेयर बाजार वाल स्ट्रीटले सावधानी गराउँदा पनि त्याँहा बिटक्वाइनको लेन-देन जारी राख्न अनुमति दिईएको छ तर घाटाको सम्भावना सधै बनिरहेको हुन्छ ।
यसको सबै भन्दा ठुलो घाटा भनेको यो भर्चुअल मुद्रा हो र लेनदेनको व्यापार निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यस मुद्राको प्रयोग ड्रग्स सप्लाई र हतियारको गैरकानुनी व्यापार र किनबेच जस्तो अवैध कामको लागि गरिन्छ । यसमा साइबर आक्रमणको खतरा पनि सधै रहन्छ तर विशेषज्ञको अनुसार ब्ल्याक चेनलाई ह्याक गर्न सजिलो हुँदैन ।
भारतले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाउदा नेपाली उद्योग धरासायी